Amahhovisi eTrovaWeb eMilan: sibazi kahle abalingani abasha
Iqembu likaMilan liyakhula: sazi umlingani omusha oyigugu
Siyazi uDkt Daniyeli Toma
Simemezele ngenjabulo ukuvulwa kwamahhovisi amasha ngaphakathi Milan futhi omunye wabalingani bethu abasha beLombard, uDkt UMartyr Belshazzar. Namuhla yisikhathi sokuveza omunye umlingani oyigugu ozophatha ihhovisi laseMilan: udokotela UDaniel Toma.
kusukela Lombardy ngentukuthelo: abahlanganyeli abasha be I-TrovaWeb zigcwele ukuzimisela, umdlandla nokuzimisela. Futhi amahhovisi aseMilanese I-TrovaWeb asevele aguqukile.
I-TrovaWebhleli Yomhleli wesekethe nochwepheshe bezezimali eziphezulu bayabambisana: ukusebenzisana okuvelele
le Amahhovisi eMilan di I-TrovaWeb sebesebenza kakhulu, ngiyabonga futhi ngaphezu kwakho konke kozakwethu ababaphathayo ngokuzimisela nangokuzimisela. Ngokubambisana Udokotela Baldassarre, amahhovisi aphathwa futhi yi udokotela uDaniel Toma, nezinye ubuntu obuhlonishwayo ngamakhono amakhulu kanye nesipiliyoni esiqinile ngemuva kwabo.
Simazi kangcono uDaniel Toma: uchwepheshe emkhakheni wezoLwazi lwezobuchwepheshe
UDaniel Toma uye emkhakheni we I-Business Economics eNyuvesi yasePavia futhi wasebenza enkampanini kayise yobabali kayise ukuthola amakhono akhe obuchwepheshe bokuqala. Ngemuva kwalokho, wasebenza eMedioBanca Group, njengoba Imenenja kuCompass, ngenkathi eqala ibhizinisi lakhe emkhakheni weUkwaziswa kwesimanje, isasebenza kuyo yonke insimu yezwe. Yonke imisebenzi yakhe yobuchwepheshe ibe nomthelela ekukhuleni kwamakhono, amakhono kanye nolwazi, okwabe kumsebenzela ukuthi athathe elinye igxathu phambili phambili emsebenzini wakhe, ngokungena emphakathini UMartyr Baldassare in Isilinganiso sePulazi.
Kusuka eMilan, ukuphathwa kwayo yonke indawo eseNyakatho ye-Italy
I-TrovaWeb wayehlala ezungeza naye abahlanganyeli benani elikhulu futhi of ukwethembeka okukhuluabahlanganyeli abakholelwa kakhulu kuphrojekthi futhi abachitha nsuku zonke ngaphandle kokubhuka ukwenza iphupho lifezeke. The UDkt. UDaniel Toma, kanye UMartyr Belshazzar, akahlukile futhi usekhombise umdlandla omkhulu zisuka nje. Bobabili bayakholelwa Iphrojekthi yeTrovaWeb kungenzeka kube yiqiniso elihlanganisiwe ezingeni likazwelonke. Ngalesi sizathu, banikela nsuku zonke kubaphathi be sede Lombard lapho banakekela khona yonke imisebenzi yebhizinisi yendawo I-North Italy.